14th March 2019, 10:04 am | ३० फागुन २०७५
शनिबार काठमाडौँमै बसेका डा.राउत आइतबार दिउँसो वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य चेक जाँच गराई त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै जनकपुर फर्केका थिए। जनकपुरमा उनको सुरक्षा दस्तासहित समर्थकहरूले स्वागत गरेका थिए।
उनको स्वागतमा स्वतन्त्र मधेश लेखिएको झन्डा र पम्प्लेट भेटिएको विषय अहिले चर्चामा छ। उनको फेसबुक र ट्वीटर अकाउण्टबाट जनमतसंग्रहका लागि सरकार सहमत भन्ने भनाइ पनि चर्चामै छ।
डा. राउतले स्वतन्त्र मधेश परिषद्को बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्। पछिल्लो पटक सिराहामा सम्पन्न बैठकपछि परिषद् बस्न सकेको छैन।
गठबन्धनका सहजकर्ता चन्दन सिंहले पहिलोपोस्टसँग भने, 'हाम्रो परिषद्को बैठकको तयारी हुँदैछ।'
प्राप्त जानकारी अनुसार गठबन्धनको परिषद् दुई तहको साङ्गठनिक संरचना बनाउने प्रस्ताव जानेछ। अहिलेको स्वतन्त्र मधेश परिषद् कायम राखेर अर्को राजनीतिक दल गठनको प्रस्ताव हुनेछ। उक्त दल सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रममा सक्रिय हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि सङ्घीय संसद्को निर्वाचनसम्म सहभागी हुन सक्छ भने वडातहसम्म कार्यालय स्थापना र सङ्गठन विस्तार गर्नेछ।
नेपाल सरकारले विप्लवभन्दा हामीलाई ठुलो समस्या मानेको थियो। राजनीतिक सहमति नगरेको भए प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सिंहको भनाइ छ।
'हामीले ११ बुँदे सहमति नगरेको भए हाम्रो सङ्गठन पनि घोषित रूपमा प्रतिबन्धित हुने थियो' सहजकर्ता सिंहको भनाइ छ।
सीके राउत के गर्दैछन् जनकपुरमा? यस्तो बनाउँदैछन् रणनीति को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।